Soo dejisan Free PDF Compress 4.2 – Vessoft
WindowsXafiiskaPDFFree PDF Compress
Bogga rasmiga ah: Free PDF Compress
Free PDF Compress – adeegsiga sahlan ee loo isticmaalo si loo cadaadiyo faylasha PDF. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto dukumiintiyada PDF ama galka oo dhan oo leh faylasha qaabkan iyo bilawga geedi-socodka xukunka. Free Compress PDF waxay faafin kartaa feylalka iyada oo loo marayo Windows Explorer ama adigoo jiidaya oo u jajabinaya barnaamijka. Barnaamijka ayaa bixiya si uu u doorto meesha loogu talagalay faylka la soo saaro isla markaana u habeeyo jadwalka sawirka qiimaha loo baahan yahay. Free Compress PDF ayaa muujinaya liiska faylasha PDF ee lagu daray barnaamijka oo ay la socoto magacyada, qiyaasta, goobaha iyo taariikhaha. Free PDF Compress ayaa sidoo kale kuu ogolaanaya inaad faylasha la wadaagto saaxiibbadaa email ahaan ama Facebook, Twitter iyo LinkedIn.
Naqshadaynta xakamaynta faylasha PDF
Isku-darka Windows Explorer
Soo gelinta faylasha
Soo dejisan Free PDF Compress
Qalabka isku xidhan
Tani waa software ah in la demiyo ama la soo rogo furayaasha loo cayimay ama maskaxda gaaban. Barnaamijka wuxuu awoodi karaa "Ctrl", "Sub", "Shift", "Windows" iyo furayaasha kale.
Raadinta iyo Bedelka badan – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu baaro oo lagu beddelo qoraalka qaababka faylasha ee Microsoft, Dukumintiga Furan, PDF, faylasha bogga keydsan iyo qaabab kaydiyaal kala duwan.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in uu sameeyo ficilada aasaasiga ah ee faylasha codka ee qaabab kala duwan, waxaad gooyn kartaa, soo saari kartaa, kala qaybin kartaa, isku dari kartaa, oo ku dabaqi kartaa saameynaha codka ee duwan ee faylasha.
Bilaashka bilaashka ah ee sirta ah – waa barnaamij yar oo lagu furayo faylasha loo yaqaan ’PDF faylalka’ oo lagu keydiyo iyada oo aan la xaddidnayn asalka. Softiweerku wuxuu taageerayaa howsha duullaanka ee faylasha.
Faallo ku saabsan Free PDF Compress
Free PDF Compress Xirfadaha la xiriira
Software ayaa si aad u eegto oo saxaa ah PDF-files. Software ka kooban yahay tiro balaadhan oo ah qalab reserved shaqada ugu wax soo saarka leh ee PDF-files.
software waxaa loogu talagalay si ay u abuuraan faylasha PDF tayo sare leh iyada oo la isticmaalayo printer dalwaddii in falgala codsiga xafiiska kasta.
Foxit Reader – waa softiweer lagu daawado oo lagu daabaco feylasha qaab PDF ah. Softiweerku wuxuu taageeraa tayo xawaare sare leh oo shaqo wuxuuna adeegsadaa qalabka ugu yar ee nidaamka.
doPDF – softiweer ayaa u rogaya qoraalka iyo feylasha garaafka qaabka PDF adoo u adeegsanaya si madaxbanaan loosameeyay daabacaha.
Suite xafiiska in waraaqaha qoraalka iyo miisaska shaqeeyaan. Waxa ay taageertaa tiro badan oo qaabab iyo hawlaha ay badal u tahay Xafiiska Microsoft.
Balaonin – waa aalad lagu akhriyo qoraal kasta ama qoraallo qoraal cod ah. Softiweerku wuxuu xaqiijinayaa tayada codka qoraalka ee codadka kaladuwan iyo xawaaraha kala duwan.
Advanced Scanner IP – waa fududahay in la isticmaalo iskaanka shabakadda si loo falanqeeyo shabakadaha maxalliga ah, iyada oo la adeegsanayo set howleedyo loogu talagalay xakameynta fog ee kumbuyuutarka.
AOMEI Image deploy – softiweer waxaa loogu tala galay in lagu xareeyo muuqaalka nidaamka oo ay la socdaan dhamaan qaybaha lagu rakibay kombiyuutarada badan ee shabakada deegaanka ee la wadaago.
DAEMON Tools Lite – barnaamij kumbuyuutareed ah ayaa lagu daydaa diskiga qibrada leh wuxuuna abuuraa faylalka sawirka qaabab kala duwan. Softiweerku wuxuu abuuraa dhowr nooc oo diskiyo isku mar ah.